AbaXhobisi boMatshini abaPhezulu kunye neFektri - China Abavelisi boMatshini abanzi
PP Bags womluki Hot Cutting Machine
Ngumatshini wokusika oshushu wokwenza iibhegi ezilukiweyo ze-PP, kuthatha ukunganyangeki kufudumeze ii-alloys wire ukusika ilaphu le-PP libe ziingceba.
PP ephothiweyo Bags Cold Cutting Machine
Umatshini wokusika obandayo wokwenza iibhegi ze-PP, kuthatha imela ukusika imisonto ye-PP ibe ziingceba.
Lo matshini wokusika weengxowa (ukusika okushushu) uveliswa ngobuchwephesha obuninzi, ukusebenzisa izinto ezizenzekelayo, ukutya okuzenzekelayo, ukusika okushushu kunye nokubala okuzenzekelayo njl.
Yi-pp ephothiweyo iingxowa zokuthunga umatshini, ezantsi zokuthunga amaqhekeza e-PP amalaphu ukumila iingxowa Ububanzi bayo besicelo: iingxowa zephepha okwakhiwa, iingxowa zezichumiso, iingxowa zokuprinta umbala, iingxowa ezidityanisiweyo, iingxowa zemichiza, iingxowa zomgubo, iingxowa zerayisi, iingxowa zokutya kunye nezinye iingxowa ezilukiweyo njl.
Iyaziwa ngokuba ngumatshini wokushicilela we-flexo okanye ibhegi kumatshini wokuprinta ibhegi ye-PP ephothiweyo, inokuprinta iingxowa zephepha ze-kraft, iibhegi zesichumiso, iingxowa ezidityanisiweyo, iingxowa zemichiza, iingxowa zomgubo, iingxowa zerayisi, iingxowa zokutya kunye nezinye iingxowa eziphothiweyo njl.
Phambili nasemva Umatshini wokuprinta
Iyaziwa ngokuba ngumatshini wokushicilela we-flexo okanye ibhegi kumatshini wokuprinta ibhegi yeengxowa ze-PP, yimveliso yethu yokushicilela imveliso yelungelo elilodwa lomenzi ngaphambili nangasemva ngexesha elinye, amacala amabini kunye. Ingaprinta okwakhiwa kwephepha, iingxowa zezichumisi, iingxowa ezidityanisiweyo, iingxowa zemichiza, iingxowa zomgubo, iingxowa zerayisi kunye neebhegi zokutya njl.
Kuyinto umatshini abangabancedani PP ephothiweyo iingxowa umatshini yoshicilelo, inokusetyenziselwa ukuqokelela iingxowa emva yoshicilelo. Inamalungu amabini, inxalenye yokuqokelela kunye nenxalenye yokuqokelela.
Bags packer yimveliso ehambelanayo koomatshini iingxowa ephothiweyo inkampani yethu. Yenzelwe ngokukodwa isantya sokupakisha esicothayo kwimarike yasekhaya nakwamanye amazwe.
PP ephothiweyo Bags cuke ukutywina Machine
Umatshini wokutywina we-Ultrasonic uyimveliso ehambelana nemveliso yeebhegi zethu. + iphepha, ukutshiza umqhaphu wokubambelela kunye necandelo le-thermoplastic thin etc.
PP ephothiweyo Bags Ukwenza Machine, ukusika kunye nokuprinta. Umatshini odibeneyo odibeneyo wokusika kunye nomatshini wokushicilela. Igcina umsebenzi kwaye yenza iibhegi zivelise ngokulula.
Ukusika okuzenzekelayo kunye nokuthunga kunye noMatshini oDityanisiweyo oshushu
PP iingxowa ephothiweyo ukwenza umatshini, ukusika, ukuthunga kunye eshushu-ukunyibilika. Umatshini odibeneyo odibeneyo wokusika, umatshini wokuthunga kunye nomatshini oshushu oshushu. Igcina umsebenzi kwaye yenza iibhegi zivelise ngokulula. Ifanele iingxowa zokushicilela ze-BOPP, iingxowa zefilimu zeparele kunye nephepha leplastikhi yeplastiki njl.